लघुकथा- बल्ल आएर बुझे !! – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
लघुकथा- बल्ल आएर बुझे !!
नाम उस्को सम्राट थियो । नाम सम्राट भएर के गर्नु, आम नेपालीको भन्दा निम्न आर्थिक अबस्थाले न त उसले स्कुल देख्न पाएको थियो ।न त घरमा खानसक्ने र एकसरो आङ ढाकन सक्ने अबस्था नै थियो । देशमा जनयुध्द नामको युध्द चलेको थियो । लक्का जवान सम्राटलाइ घरबाटै छोपेर जंगल लगी राइफल समात्न लगाएका थिए । उसले क्रान्तिकारीबाट धेरै कुरा सिक्न पायो । सबभन्दा ठुलो कुरो उसले ति क्याम्पमा अक्षर चिन्ने र लेख्न सिक्यो । सम्राट तीक्ष्ण बुद्दि भएकोले मार्क्सबादी सिध्दान्त पनी कन्ठै भएको थियो । युद्धकलामा निपूर्ण भै हुदाँ हुदा कमान्डर पनी भयो । थुप्रै सरकारी फोर्स क्याम्प ध्वस्त भएका थिए उसैको नेतृत्वमा ।
एउटा आक्रमणमा उसले दाइने खुट्टा गुमाउन पुग्यो । घरमा सैनिकले रेड गरेर उस्को बाबु दानबहादुरलाइ मारेका थिए । घरमा बुढी आमा र उ छन, अहिले । देशमा उ लडेको पार्टी सत्तामा छ । सम्राटको आर्थिक स्थिति अझ बिग्रदो भैरहेको छ । उ अपाङ्ग छ । आमाले निबेक गरेर पेट पाल्न गारो परेको छ । निबेक गरेको पैसाले चामल पटुकाबाट भाडामा खन्याउदै भन्छिन । सम्राट, त संगै लडेको श्यामले त राजधानीमा ठुलो घर बनाएछ रे । मन्त्रि पनी भा छ रे । अब त यता कहिले देखिन्न ? मैले त क्रान्ति स्रान्ती केहि बुझ्दिन, मैले बुझेको कुरा त राजनीतिले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, गास बास र रोजगारीको व्यवस्था गर्नेलाइ हो भन्ने सुनेकी थिए । ति मात्रै असली राजनेता हुन् भन्ने सुनेको थिए । पहिले पहिले नेपालमा एउटा राजा थिए रे ? जनताको घरमा चुलो बलेको छ छैन भनेर जांच भए पछि मात्र भात खान्ते रे ? हैन कस्तो क्रान्तिकारी ? कमनिष्ट भन्छन कांग्रेस भन्छन सिदान्त भन्छन । न ब्यापार गरेका छन न उद्योग गरेका गरेका छन । हैन कसरी सम्पत्ति कमाएछ्न, तिनका पछि लाग्नेले । लौ न भन मलाइ सम्राट, तँ त राजनिती गरेको युध्द लडेको मान्छे । हैन राजधानी भन्ने ठाउ नेपालमा नै छ ?
सम्राटले टाउको निहुराएर आँखाभरी आँशु झार्दै भन्यो, “आमा यी सबै मान्छे तपाइका पालाका जस्तै नक्कली मान्छे थिए” हात्तीका देखाउने दाँत र चपाउने फरक फरक हुन्छ । यी त्यस्तै हुन । साच्चै भन्ने हो भने यी हत्यारा हुन । म जस्तै गरिबको खुनमा होली खेली, पुरानालाइ फालेर नयाँ राजा बनेका मात्र हुन । अब ढिलो भैसकेको छ । बल्ल आएर बुझेको छु, आमा भन्दै आमाको काखमा टाउको राख्छ सम्राटले । आमाले सम्राटको टाउको मुसार्छिन ।